Mabhuku evana: Tea Stilton Classics uye Martina Series | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku e Tea stilton —Zvino nekudzokororwa kutsva uku kudanana zvekare- Y Martina, ivo Martina D'Antiochia, ndiwo mamwe emasaga anozivikanwa pakati pevaverengi vadiki. Tinozviongorora.
Mabhuku emoyo - Tea Stilton
Yakabuda gore rapfuura uye muunganidzwa wemazita akagadziridzwa ezvemakesi ezvinyorwa zvepamoyo zvese. Vanotiudza Tea stilton, mutori wenhau uye nhume yakakosha ye Echo yeRodent, iye zvakare nyeredzi mune akateedzana ake nechikwata cheshamwari dzake kubva Tea Kirabhu. Zvese, pamusoro pezvo, pakupera kweumwe neumwe zvinopa maonero avo uye ruzivo rwakawanda rwakawanda nezvevanyori uye nhoroondo, tsika nemagariro mamiriro ebasa rega rega.
Ehe vanhu vese vari mumabhuku imbeva. Uye isu tinofanirwa kusimbisa iyo yakashambidzika uye inokwezva kwazvo edition zvinyorwa zviviri- zvine mavara akasiyana emarudzi akasiyana uye saizi- uye mifananidzo, iyo dzimwe nguva iri mbiri-peji.
Bhuku rekutanga ndere Kuzvikudza uye kufungira zvisizvo, zvirokwazvo iro basa rine mukurumbira raJane Austen. Yechipiri ingangodaro iri yeakakurumbira zita mumabhuku erudo, Romeo naJulietnaWilliam Shakespeare. Zvakare kutendeka kuchinyorwa chekutanga, chinoshandurwa kuita chiprojekiti chiri nyore kwazvo kuverenga nekutevera.
Uye munaKurume zita rechitatu rakasarudzwa rinobuda, rinova Iyo Phantom yeiyo Opera, nemunyori wechiFrench Gaston Leroux, rimwe basa rakakosha remhando iyi, rinonyanya kuzivikanwa ne mimhanzi yake.
Kuzvikudza uye Kusarura
Iyo Phantom yeiyo Opera
Kufara kwaMartina - Martina D'Antiocha
El phenomenon kubva kuMarbella Martina D'Antiochia ndeimwe yeakajeka uye akabudirira mumakore apfuura. Pazera remakore gumi nemashanu, Martina ari chaizvo kutaurirana nyeredzi, maakatanga ari musikana mudiki kwazvo. Kutanga nemavhidhiyo aakatanga kuisa kuYouTube pane dzakawanda misoro uye, kubva ipapo, akawedzera masocial network uye zvimwe zvakawanda zvemukati.
Iye anga asina kugutsikana neizvozvo uye ave zvakare mutambi wemuviri mukunyunyuta uye kuve mumwe wevamiriri ve Baba pane mumwe chete, iyo firimu naSantiago Segura.
Nhevedzano yake ye Kufara kwaMartina haigone kuburitswa zvakanyanya kubudirira, sezvo mabhuku ake maviri ekutanga, Njodzi yekuzvarwa y Adventures muLondon, chii chaive bestseller Mazuva makumi maviri mushure mekuburitswa. Ikozvino kune gumi mazita uye vese vanogovana rimwe yakangwarira edition, iri nyore kuverenga uye yakanangana nevateereri kubva kune vacheche zvakanyanya kubva ku Makore masere kana mapfumbamwe zvichikwira.
Kupera kwechokwadi muparadhiso
Chakavanzika pachikoro che boarding
Rwendo rwakatarisana pasi
Uye haana kugadzikana nenyaya dzino nekuti rine rimwe rakanzi Ini handina kufanana, uyo anonyora uye nyeredzi pane yake yechipiri YouTube chiteshi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vechidiki Mabhuku » Mabhuku evana: Tea Stilton zvekare uye Martina akateedzana
Mabhuku naPilar Eyre